Cobra Tattoos Zvinoreva | Kunyora
Zvinoreva zvecobra tattoos
Susana godoy | | Mhuka Tattoos, Mhando dzematatoo
Cobra maTatoo haana kujairika asi iwo akajairwa uye kana aitwa mushe ane runako runoshamisa. Mhungu mutsika dzakawanda dzinoonekwa seimwe yenyoka dzinotyisa uye dzinotyisa. Chirevo chakajairika zviri nyore kuziva: njodzi, simba, huchenjeri, kuzvarwa patsva, kubereka, tsitsi uye huremu, chii chingave chirevo kwauri kana iwe ukanyora nyora cobra?
Asi zvinoenderana nenzvimbo uye nenguva iyo mhungu dzemhungu zvinogona kureva zvinhu zvakasiyana kwazvo. Semuenzaniso mu Yekare Ijipiti iyo mhungu yaibatanidzwa nenyika kupfuura kufa nekuti mhungu yakawanikwa muguva raTutankhamun semucherechedzo wekudzivirira kune mufi pharao.
Zvakare kana mhungu paakapendwa pamadziro etembere zvinoreva kusimba nesimba, nekuti vanhu vanoiswa pasi pesimba remhungu vachagara vachitya.
MuIndia, mhungu kwenguva yakareba yaionekwa seimwe yemhuka dzinoyera uye ndosaka iri mucherechedzo wesimba rehumambo. Kuona mhungu padhuze muIndia kunoonekwa senge yakanaka mashura. Muchitendero cheBuddhist nyoka inoonekwa semudziviriri.
Hatigone kupokana kuti mhungu dzine runako rukuru asi panguva imwe chete ivo vanotyiwa, Ndokusaka iyo tattoo inogona kuve nezvakawanda zvinoreva. Saizvozvo, zvakare mucherechedzo wekumutsiridzwa sezvo nyoka dzinodurura ganda radzo uye kuzvivandudza. Zvichida nekuda kweichi chikonzero chinoonekwawo nevamwe vanhu sechiratidzo chekusafa uye kuvandudzwa kwehupenyu.
Uye kwauri, zvinoratidzei mhungu cobra? Heino gallery yemifananidzo kuti iwe ugone kuona kuti akanaka sei kunge tattoo asi panguva imwe chete maitiro avo ane hukasha anoita kuti vatye kunyangwe kuve paganda remumwe munhu setatoo.
1 Mhando dzemhungu dzemhungu
2 Kwokutora tattoo yemhungu
Mhando dzemhungu dzemhungu
3D kana matatu-matatu mativi ivo vanotipa isu inopfuura chaiyo sitayilo Izvi zvinodaro nekuti zvinotitaurira kuti mhuka iri kutaurwa inoita kunge iri kubuda muganda. Iko kusanganiswa kwemimvuri, iyo inoipa iyo yekuzorodza mhedzisiro uye rakakura basa reatato muimbi ichaita uyu unoshamisa mhedzisiro. Naizvozvo, cobra tattoos inogona zvakare kuve neiyi dudziro iyo ichavaita kuti vabude pachena zvakanyanya, kunyangwe iwe ukaapfeka iwo pamaoko, chifuva kana makumbo. Ichava nehupenyu!
Isu tinotaura zvechokwadi kana ese apera emhungu aine mukurumbira. Pakati pavo, zvese zviri zviviri chimiro, ruvara, rurimi kana fangs zvichabatanidzwa mune dhizaini yekupa izvo kunzwa kwechokwadi kana uchidhonza. Ehezve, havawanzo kutakura mimvuri yatakambotaura nezvayo kana iyo ndege yekuzorora iyo yakadzoserwa mu3D. Zvakadaro kunzwa kwechokwadi kuchikunda, izvo zvinowedzera kubata kwekutanga uye kuratidza. Muzviitiko izvi, maTattoo anowanzove nehukuru hwakakodzera, pakati nepakati kana hukuru, kuitira kuti iwo ese iwo ruzivo aratidzike zvakanaka.
ari cobra tattoos ane maruva vane chirevo chakajeka icho hachisi chimwe kunze kwekuyedzwa. Nzira yekutarisa kumashure uye yekureva kuna Evha, gadheni reEdheni kuna dhiabhori ari nyoka. Tinogona kuzvipa mucherechedzo wekusiya kusava nemhosva kutora danho rakasimba muhupenyu nekukura. Ehezve, vanhu vazhinji vanotora nyora tambo iyi chete nekuda kwerunako rwayo, vasingatarise zvakanyanya kune chiratidzo chayo.
Kune rimwe divi, isu tinogona kupa iwo ruvara watinoda kune iyo cobra tattoos, ichipa zvishoma zvishoma chokwadi mavari. Asi pasina kupokana kune mumwe, hatigone kukanganwa iyo watercolor mhedzisiro iyo inowanzo kuve irwo mune urwu rudzi rwekugadzira. Kubatanidzwa kwemumvuri kunoita kuti mhedzisiro yekupedzisira ive yakasimba.
Kwokutora tattoo yemhungu
Imwe yema canvases akanakisa ruoko, kunyanya kana zvasvika kune cobra nyora. Sezvo tichitenda kune chimiro chayo, tinogona kuzviisa ivo vaviri muchikamu chepamusoro cheruoko ndokuchirega chichienda kumberi pasi, kana kusarudza ruoko rwemberi. Zvese zvinoenderana nesaizi yesarudzo yakasarudzwa. Vamwe vanosarudza saizi yakakura uye inowanikwa munzvimbo dzakarongeka, nepo vamwe vachida chimwe chinhu chinotyisa uye kuti nyoka inofamba neganda.
Ruoko harwo rusununguko kubva pakuva nemhungu padyo naro. Kune rimwe ruoko iwe unogona kusarudza dhizaini muchimiro chebracelet uye uko musoro unoonekwa muchikamu chepamusoro cheruoko. Ehezve, vamwe vanhu vanosarudza iyo minimalist cobra nyora uye dzinopenya pachikamu cheminwe, semhete. Ivo vanogona zvakare kuonekwa munzvimbo yechioko uye ndeimwe yeakanyanya kufarira. Sezvo isu tichiona, sarudzo dzinoverengeka dzinosanganisira saizi. Sezvo iri muruoko, ivo vanowanzo kuve vakangwara dhizaini.
Imwe nzira yekuenda kudhirowa nzvimbo yemusana, kubva kunape, ine tattoo yemhungu. Uye zvakare, mune ino kesi iwe unogona kusarudza iyo nhema inki uye kuisanganisa pamwe neruzivo muchimiro chemapanga kana maruva, zvinoenderana nesarudzo yako. Kamwe zvakare, iwo magadzirirwo anogona kusanganiswa neakadzikiswa saizi kana kutakurwa neakakura acho.
ari mhungu dzemhungu pachipfuva Ivo kazhinji vanonyanya kudiwa nevarume, asi ivo havasi kumashure kumashure. Iwo ekutanga anowanzoonekwa mune yakakura saizi uye yavo, yakati wandei yakangwara asi inogara iri yepakutanga uye vachimakisa chiratidzo chavo zvakanaka. Muinki dema uye nemabhureki akaomarara, kazhinji ndiwo sarudzo akasarudzwa.
Kufanana nechikamu cheruoko, kana tichitaura nezverudzi urwu nyora asi pamakumbo, vanogona zvakare kuve nemhedzisiro yakafanana. Kupfuura chero chinhu nekuti ivo vanoonekwa munzira ine mabwe, sebhandi. Kunyangwe iwo magadzirirwo ayo anoratidza kuti nyoka inokwidza sei gumbo nehumwe humboo hausi kumashure kumashure. Pasina kupokana, misiyano yetatoo seiyi inogara isingaperi.
La kunhonga mhungu pabendekete, inogona kuve yepakutanga. Imwe yemagadzirirwo anomiririra aya mavambo ndiyo inotitaridza musoro wemhungu kuti inobuda sei kubva pabendekete kuenda pachipfuva. Ehezve, pane dzimwe nguva isu tinogona kuwana mazano yakatwasuka ayo anotangira kubva pabendekete kusvika kuzasi kwemutsipa. Mune yekupedzisira, ivo vanogara vachiperekedzwa nehumwe ruzivo rwakaita semaruva.
Mifananidzo: Pinterest, www.voyageafield.com, www.tattoodaze.com, @ sararosacorazon.art, www.thewildtrends.com, peekinsta.com, es.tattoofilter.com, latatoueuse.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Mhuka Tattoos » Zvinoreva zvecobra tattoos
Mhoro Aurora, mune iyi link unogona kutitumira nyora yako kuti ubudise uye rega vamwe vaverengi vazvione → http://www.tatuantes.com/enviar-tatuaje/
Compass yakasimuka nyora
Zvinoreva mawatch tattoos